योगेन क्षेत्रीमाथि कारवाहीको तयारी ? | We Nepali
२०७१ कार्तिक १० गते १०:२२
लण्डन । एनआरएनए युकेका कार्यकारी अध्यक्ष महेन्द्र कंडेलले संस्थाको गतिविधि विपरीत कार्य गरे सहअध्यक्ष योगेन क्षेत्रीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सहअध्यक्ष योगेन क्षेत्रीले आगामी नोभेम्बर २ मा पत्रकार सम्मेलनका लागि मिडियालाई पत्राचार गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष कंडेलले कारवाही गर्ने बताएका हुन् ।
सहअध्यक्ष क्षेत्रीले आफैले हस्ताक्षर गरेको सहमतिलाई ‘तथाकथित’ भन्दै कार्यकारी अध्यक्षको दावी गरेका छन् । ‘अध्यक्षको अनुमति विना कसैले कार्यक्रम गर्छ भने कारवाहीको भागिदार हुन्छ, त्यसैका लागि अनु्शासन समिति बनाइएको हो’, वीनेपाली डटकमसँग अध्यक्ष कंडेलले भने । उनका अनुसार कार्यसमितिका सबै सदस्यहरु अनुशासनमा बस्नु पर्छ ।
दुई चिरा हुन लागेको एनआरएनए युकेलाई गत २९ सेप्टेम्बर २०१३ सालमा ‘असाधारण एकता सम्मेलन’ मार्फत एकता गरिएको थियो । सहमति अनुसार शुरुको एक वर्ष कार्यकारी अध्यक्ष पद क्षेत्रीले सम्हाल्ने र २९ सेप्टेम्बर २०१४ देखि कार्यकारी अध्यक्ष पद महेन्द्र कंडेललाई क्षेत्रीले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो ।
तर एकताको सहमतिमा दोस्रो हस्ताक्षरकर्ताका रुपमा रहेका क्षेत्रीले पद हस्तान्तरणको मिति गुज्रिसकेपछि एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सहमति नमान्ने बताएका थिए र सहमतिको पहल गर्ने प्रा. डा.सूर्य सुवेदी विरुद्ध पनि सहअध्यक्ष क्षेत्री खनिदै आएका छन् ।
एनआरएनए युके विवादमा एनआरएन अन्तर्राष्ट्रिय परिषद् (आइसिसी)ले छानविन समिति गठन गरेको अपुष्ट समाचार सञ्चार माध्यममा आए पनि यसको स्वतन्त्र पुष्टी हुन बाँकी छ । आइसिसीबाट छानबिन समितिका बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नआएको अध्यक्ष कंडेलले बताए ।
सहअध्यक्ष क्षेत्रीले मंगलबार मिडियामा पठाएको इमेलमा प्रमुख संरक्षक, संरक्षक, पूर्वअध्यक्षहरु, सल्लाहकारहरु, उपाध्यक्ष र सदस्यहरुलाई उक्त बैठकमा उपस्थितिका लागि अनुरोध गरेका छन् ।
क्षेत्री पक्षका महासचिव योगकुमार फगामीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा २ नोभेम्बरमा गरिने भेलामा एनआरएनए युकेले हालसम्म गरेका प्रगति विवरण, गत वर्षको नेतृत्व हस्तान्तरणको चक्रिय प्रणाली, काउन्सिल बैठकका निर्णय कार्यान्वयन तथा आइसिसीले हालै चालेका कदम र आर्थिक पारदर्शिताका बारेमा छलफल गरिने उल्लेख छ । सो भेला लण्डनभन्दा केही टाढाको शहर अल्डरसटमा हुने उल्लेख छ ।
उता, कंडेल पक्षले भने गत वर्षको सहमतिअनुसार एनआरएनए युकेको नाममा भेला, पत्रकार सम्मेलन, बैठक डाक्ने अधिकार मौजुदा कार्यसमितिलाई मात्र हुने उल्लेख गर्दै क्षेत्री पक्षले बोलाएको भेला अवैधानिक हुने दाबी गरेको छ । कंडेलले विधान र सहमति विपरीत डाकिएको सो भेला समयमै रद्द गर्न पनि क्षेत्री पक्षलाई अनुरोध गरेका छन् ।